सउदीद्वारा अर्वपति बेजोसको फोन ह्याक, यसकारण भएको थियो मेकेन्जीसँग डिभोर्स
२०७५ चैत १७ आइतबार, काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा अमेजन कम्पनीका मालिक जेफ बेजोसको फोन सउदी अरबका अधिकारिहरुले ह्याक गरेको गाविन डी बेकरले आइतबार दाबि गरेका छन् । बेजोसको निजी तस्वीहरु लीक भएको मामिला जांच गरिरहेका बेकरले सो दाबि गरेका हुन् । बेजोसको तस्विरहरु लीक भएपछि उनको श्रीमति मेकेन्जी बेजोससँग सम्बन्धबिच्छेद भएको थियो । ... बाँकी अंश»
'टाइमपास' गरिरहेका युवकलाई गुगलले दियो १ करोड ९२ लाखको जागीर
२०७५ चैत १७ आइतबार, काठमाडौं । ईन्टरनेट सर्च, क्लाउड कम्प्युटिङ र विज्ञापनको क्षेत्रमा अत्याधिक लगानी गरिरहेको बहुराष्ट्रीय कम्पनी गुगलमा काम गर्न धेरै मानिसहरुको सपना हुन्छ । संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट कम्पनीहरुको सुचीमा छ गुगल । यहां काम गर्नेको इज्जत आफै बढेको पाइन्छ । यदि कुने घरका व्यक्ति गुगलमा काम गरे पुरै परिवारले नाता गोतामा प्रचार गर्छन् । ... बाँकी अंश»
मृत्यु पुर्व चेतावनी दिने प्रविधि बन्यो
२०७५ चैत १५ शुक्रबार, काठमाडौं । वैज्ञानिहरुले एक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित कम्प्यूटर सिस्टम विकसित गरेका छन् । जसले मध्यम आयु वर्गको जनसंख्यामा पुरानो रोगहरुका कारण समय भन्दा पहिले हुने मृत्युको बारेमा बताउनेछ । प्लस वन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनका अनुसार कम्प्यूटर आधारित ‘मशीन लर्निङ’ एल्गोरिदम प्रणाली मृत्युको सम्भावना बताउन निकै सटीक छ। ... बाँकी अंश»
यस्तो छ एन्टी स्याटेलाईट मिसाइलको इतिहास
२०७५ चैत १४ बिहिबार, काठमाडौं । बुधवार भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो) ले एन्टी-स्याटेलाइट मिसाइल (एसेट) को प्रयोगबाट करीब तीन सय किमी दुरिमा रहेको ला अर्बिट (कक्ष) मा एक लाइभ स्याटेलाईटलाई नष्ट गर्‍यो । सो सफलतासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भारत अन्तरिक्ष महाशक्ति बन्ने घोषणा गरे । ... बाँकी अंश»
अदालतमा अब रोबोटले फैसला सुनाउने
२०७५ चैत १४ बिहिबार, काठमाडौं । अदालतमा अब रोबोटले फैसला सुनाउने भएको छ । उत्तरी यूरोपको एस्टोनियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) रोबो-जर्ज बनाइएको छ । जसले तल्लो अदालतमा लामोसमय सम्म पेन्डिङमा रहेका मामिलालाई व्यवस्थित गर्नेछ । रोबोटले सुनाएको सबै फैसला आधिकारीक मानिनेछ । उजुरीकर्ताले मानव जजबाट फैसलाको अपील गर्न सक्ने अधिकार भने पाउनेछन् । ... बाँकी अंश»
सिजी लाईफसेलको बिप एप सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
२०७५ चैत १४ बिहिबार, काठमाडौं। सिजी लाईफ सेलले सूचना प्रविधिको सम्प्रेषणमा सहजता ल्याउनको लागि विप एप सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चौधरी ग्रुप अन्तर्गत्को सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने नयाँ विजिनेश भर्टिकलको रुपमा सो एप सार्वजनिक गरिएको चौधरी ग्रुपले जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
ह्याकरको निशानामा फोरजी नेटवर्क, आगमन कल र क्यासेन हुनसक्छ बन्द
२०७५ चैत ११ सोमबार, काठमाडौं । प्रविधि र उच्च गतिको इन्टरनेटले पछिल्लो समय विश्वभर आमसञ्चारको क्षेत्रमा नयाँ उडान भरेको छ । प्रयोगकर्ताले फोरजी इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वको कुनै पनि स्थानमा आफ्ना साथीभाइ तथा परिवारको साथमा कलका साथै भिडियो कल पनि गर्न सक्छन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ चैत ११ सोमबार, काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज ७ लाई बन्द गर्ने भएको छ । हालै माइक्रोसफ्टले विन्डोज ७ का प्रयोगकर्ताहरुलाई नोटिफिकेशन पठाउन सुरु गरेको छ । जसमा कम्पनीले अब विन्डोज ७ अपरेटिङ सिस्टमको लागि अपडेट उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ... बाँकी अंश»
एलियनले खोजिसके मानिस, लुकेर राख्दैछन् निगरानी
२०७५ चैत १० आइतबार, काठमाडौं । ब्रह्माण्डमा एलियनहरु छन् वा छैनन् भन्ने कुरा मानिसहरुको लागि सधैं रहस्यमयी रहँदै आएको छ । यस्तोमा केही वैज्ञानिकहरुले एलियनले मानिसलाई खोजिसकेको दाबी गरेका छन् । साथै उनीहरुले मानिसलाई चिडिया घरमा राखेको जसरी निगरानी गरिरहेको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशनले कसरी काम गर्छ ?
२०७५ चैत ९ शनिबार, काठमाडौं। अन्तरिक्षको विषयमा जानकारीका लागि राखिएको अन्तरिक्ष विमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) भनिन्छ। यसलाई पृथ्वीको कक्षमा राखिएको छ। यो अन्तरिक्षमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको घर पनि हो। यो फरक किसिमको वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो। ... बाँकी अंश»
रोबोटले दिनेछ अब पहरा, अवैध गतिविधिका साथै अन्य सूचना पनि दिन्छ
२०७५ चैत ९ शनिबार, काठमाडौं । चीनमा घरको सुरक्षाको लागि रोबोटको प्रयोग शुरु गरिएको छ । उक्त ‘रोबोट वाचम्यान’ ले घरको विश्वसनीयरुपमा सुरक्षा गर्ने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ चैत ८ शुक्रबार, काठमाडौं । गत महिना बार्सिलोनामा आयोजित मोबाइल वल्र्ड कांग्रेसमा एचएमडी ग्लोबलले नोकिया ९ प्योरभ्यु सार्वजनिक गरेको थियो । यो स्मार्टफोन पाँचओटा लेन्स क्यामेरा भएको पहिलो स्मार्टफोन हो । ... बाँकी अंश»
ओपोको पहिलो ५ जी स्मार्टफोनले पायो मान्यता
२०७५ चैत ७ बिहिबार, काठमाडौं । ओपोको पहिलो फाइभजी स्मार्टफोन, स्पोर्टन ईन्टरनेसनल ईंकद्वारा आयोजित फाइभजी सीई परिक्षणमा सफलतापूर्वक उत्तिर्ण भएको कम्पनीले घोषणा गरेको छ । यस संगै कम्पनीको पहिलो फाइभजी स्मार्टफोनलाई सीटीसी एडभान्स्ड जीएमबीएचद्वारा फाइभजी सीई सर्टिफिकेट प्रदान गरिएको छ । स्पोर्टन ईन्टरनेसनल ईंक एक वैश्विक निरिक्षण सेवा प्राधिकरण हो । ... बाँकी अंश»
बिल गेट्सको सम्पत्ति १ खर्ब डलर नाघ्यो, यो सफलता हासिल गर्ने संसारमा २ जनामात्र
२०७५ चैत ७ बिहिबार, काठमाडौं । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको सम्पत्ति २० वर्षपछि पुनः १ खर्ब डलर नाघेको छ । यसअघि सन् १९९९ मा गेट्सले यो सफलता हासिल गरेका थिए । यो सफलता पाउने संसारमा केवल २ जना व्यक्ति मात्र छन् । एमजनका जेफ बेजोसले यसअघि नै यो सफलता पाइसकेका छन् । एकैपटक २ व्यक्तिको सम्पत्ति १ खर्ब डलरभन्दा माथि रहेको यो पहिलोपटक हो । ... बाँकी अंश»
भारतका यी वैज्ञानिक जसलाई २४ वर्षसम्म मानिन्थ्यो गद्दार, पछि पाए पदम् भूषण पुरस्कार
२०७५ चैत ५ मंगलबार, काठमाडौं । भारतका एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिकमाथि मुलुकसँग गद्दारी गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसका लागि उनी जेल पनि गएका थिए तर अन्तिममा उनले सरकारबाट सम्मान पनि पाएका थिए । ... बाँकी अंश»
४७ बर्ष नखुल्ने गरि नाबालकले गरे आईफोन लक
२०७५ चैत ४ सोमबार, काठमाडौं । केटाकेटीलाई मोबाइल दिनु आफैमा खतरा हो । यसले केटाकेटी मात्र नभएर कहिले काहि मोबाइलमा पनि क्षति हुने गरेको छ । यस्तै एक घटना चीनमा भएको छ । त्यहां एक बालकले मोबाइलमा यति धेरै पटक गलत पासवर्ड हाल्यो की मोबाइल करीब ४७ बर्षको लागि लक भयो । ... बाँकी अंश»
२०७५ चैत ४ सोमबार, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘डिजिटल नेपाल’ निर्माणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
वाइफाइ स्लो छ ? छिटो बनाउन यसो गर्नुहोस्
२०७५ चैत ४ सोमबार, काठमाडौं। वाइफाइबाट इन्टरनेट चल्ने डिभाइसहरुको संख्या बढ्दो क्रममा छ। यस्तोमा वाइफाइको प्रयोग बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । वाइफाइको प्रयोगमा कहिलेकाँही भने समस्या आउन सक्छ । ... बाँकी अंश»
स्मार्टफोनमा राम्रो क्यामेरा खोज्छन् ८९ प्रतिशत भारतीय ग्राहक
२०७५ चैत ३ आइतबार, काठमाडौं । स्मार्टफोन खरिद गर्दा फोनको हार्डवेयर र सफ्वेयरको विषयमा फरकफरक फिचर्सबारे निकै ध्यान दिने गरिन्छ । पछिल्लो रिपोर्टअनुसार ८९ प्रतिशत भारतीय स्मार्टफोन खरिदकर्ताको लागि पहिलो प्राथमिकतामा राम्रो क्यामेरा पर्ने गरेको छ । ... बाँकी अंश»
फेसबुकले बन्द गर्दैछ यस्ता फोटो र भिडियो, कम्पनीले तयार गर्‍यो एआई टूल
२०७५ चैत ३ आइतबार, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा यौन उत्पीडनको बढ्दो घटना रोक्न फेसबुकले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसका लागि एक टूल तयार पारेको छ । यो टूलले आफैं अश्लील फोटो र भिडियो खोज्नेछ र त्यसलाई डिलिट पनि गर्नेछ । ... बाँकी अंश»